विशेष Archives ~ Page3of 43 ~ Banking Khabar
गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालको कार्यकाल : बैंकिङ क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को, दर्जनौ सफलता
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपाल सफल गभर्नरको सूचिमा परेका छन् । डा. नेपालको कार्यकालमा बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका कामहरु भएका छन् । उनले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि थुप्रै सकारात्मक नीतिहरु ल्याएका थिए । विगत पाँच वर्षमा पाँच वटा मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि
बीमा समितिको स्वयत्तता खोस्नेगरी ‘नयाँ विधेयक’मा अर्थमन्त्रीको सक्रियता
बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा सम्बन्धि विधेयक आफू अनुकुल बनाउन चाहेको देखिएको छ । बीमा सम्बन्धि संसदमा पेश गरिएको नयाँ मस्यौदाले बीमा समितिको स्वायततामाथि प्रस्न उठाएको छ । बीमा समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधा, विनियम तथा संरचनाका कुरामा आफै निर्णय गर्न पाउँछ । तर नयाँ मस्यौदामा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति बिना यी कामहरु गर्न नपाइने
बैंकिङ खबर । विश्वभरी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठुलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरु गएका प्रायः मुलुकमा कोरोना संक्रमणका कारण ठूला ठूला कम्पनीहरु नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण नेपालीहरुको रोजगारीमा समेत असर पर्न गई आम्दानी कम हुने र नतिजास्वरुप रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने देखिन्छ । त्यसमाथि
अपेक्षा ढुंगाना, बैंकिङ खबर । बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्विकार गर्दछ र सर्वसाधारणको माग अनुरुप भुक्तानी गर्नुको साथै उनीहरुको माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दछ । सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राखिदिनुका साथै बैंकले किसान, व्यापारी, उद्यमी एवं सर्वसाधारणलाई कर्जा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले बैंक जनताको एउटा विश्वासिलो र भरपर्दो संस्थाको रुपमा परिचित छ । बैंक यस्तो संस्था हो जसलाई
बैंकिङ खबर । वि.सं. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि नियुक्त भएका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा हुन् । हालसम्म नेपालमा १६ जना गभर्नर नियुक्त भएका छन् । वर्तमान गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपाल कार्यकालको अन्त्यतिर छन् भने नयाँ गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ । हालसम्ममा गभर्नरहरु हिमालय शमशेर जबरा लक्ष्मीनाथ गौतम प्रद्युम्नलाल
बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैंकको नाफा घटेको छ । केहीको सामान्य बढेको छ भने थोरैको मात्र राम्रो प्रगति देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको स्प्रेड रेटमा गरेको कडाई र स्प्रेड रेट गणना विधिमा गरेको परिमार्जनका कारण चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको वासलात प्रभावित भएको हो । धेरै
बैंकिङ खबर । विकास बैंकहरु तिब्र रुपमा मर्जर हुने कार्यमा छन् । आगामी तीनमहिना भित्र चारवटा विकास बैंक अरुमा गाभिने छन् । कैलाश विकास बैंक प्राइम कमर्सियल बैंकमा गाभिने अन्तिम चरणमा छ भने गण्डकी विकास बैंक पनि मेगा बैंकमा गाभिन लागेको छ । त्यस्तै, देवः विकास बैंकले कुमारी बैंकमा विलय हुने सम्झौता गरेको छ ।
बैंकिङ खबर । एकातिर नाफा बढाउनुपर्ने तनाव त अर्कोतिर जोखिम कम गर्नुपर्ने तनाव । बैंकरहरु यति बेला चौतर्फी तनावमा छन् । पुँजी वृद्धि, शाखा विस्तार एवम् लगानी विस्तारका साथै प्रविधि समेतको विस्तारले बैंकको व्यवसाय बढेको त छ नै साथमा जोखिम पनि बढिरहेको छन् । बैंकरहरुलाई व्यवसाय विस्तार र जोखिम न्युनीकरण बीचमा सन्तसलन कायम गर्न हम्मे
बैंकिङ खबर । बैंकमा चेक डिपोजिक गर्न जाँदा तीन पुस्ते विवरण चाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले केही समयअघि नै एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ सिस्टम –एएमएललाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई यसमा आवद्ध हुन माघ १ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । अहिलेसम्म डेढ दर्जन बैंकहरु गो एएमएल प्रणालीमा
बैंकिङ खबर । परिवारको वित्तीय सबलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु भनेको कुनै–कुनै तरिकाले राष्ट्रलाई नै असर पर्दै जानु हो । वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान पनि वित्तीय साक्षरताको अर्को उद्देश्य हो । कसरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने । स्रोत कहाँबाट जुटाउने, कहाँ लगानी गर्ने, आय विश्लेषण, लगानी विश्लेषण कर्मचारी भर्ना विधि, पूँजीगत निर्णय, सम्पत्ति दायित्व, आम्दानी खर्च नगद प्रवाह, रुपैयाँको
बैंकिङ खबर । प्रविधिको विकास विश्वव्यापी रुपमा नै तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कम लागतमा धेरै काम सहज तरिकाले हुने भएपछि हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढीरहेको छ । नेपालमा पनि हरेक क्षेत्र विस्तारै प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको छ । हातहातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेटको सुविधा भएपछि जुनसुकै स्थान र समयबाट ठूलाठूला कारोबारहरु गर्न सम्भव भएको छ । कर
विपन्न मुलुकहरुमा कर्मचारीको तलब अबस्था कमजोर
बैंकिङ खबर । गरीब, विपन्न वा अविकसित मुलुक भन्ने वित्तीकै अफ्रिकी वा दक्षिण एशियाली मुलुकहरु दिमागमा आउँछन् । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा वा विकासात्मक गतिविधिका आधारमा यी मुलुकहरु अमेरिकी वा युरोपेली मुलुकभन्दा पछाडी छन् । हाल प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मुलुक लाइबेरिया रहेको छ । लाइबेरियाको प्रतिव्यक्ति आय ७१० अमेरिकी डलर मात्रै छ । त्यस्तै,
बैंकिङ खबर । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीको दवावमा परेको बुझिएको छ । जसकारण बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो । तथापी यो विषय राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको विषय होइन । यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा सरकार र बैंकरबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा.